TTSweet: Blue mountain သို့ အလည်တစ်ခေါက်
Posted by T T Sweet at 2:32 PM
ကေဘယ်ကားစီးချင်သွားပြီ မမ။ လက်ခုပ်တီးတဲ့အပြင် လက်ခေါက်ပါမှုတ်သွားတယ်နော်။
susu October 5, 2011 at 3:54 PM
Thandar Lwin October 5, 2011 at 3:56 PM
ပျော်စရာကြီး မမအလန်ကွာတာ ဆွိ။
ဂျူဂျူလေး စတိုင်အတော်မိ ။
Vista October 5, 2011 at 4:04 PM
အလန်ကွာတာဆွိ နှင့်ညက်ခုံးကျုံ့ ကိုယ်တော်ကြီး ဟိဟိ။ မိုက်တယ်ကွာ
မြသွေးနီ October 5, 2011 at 4:12 PM
ရှုခင်းတွေ လှလိုက်တာတော်...။ ကျိုက်ထီးရိုး အလွမ်းပြေဖြစ်သွားမှာ သေချာတယ်အစ်မဆွိရေ..။ အလန်ကွာတာဆွိရဲ့ ရိုက်ချက်လေးတွေက တကယ်မိုက်ပ့ါရှင်..။
ဤတွင်သတင်းများကို ကြေငြာလို့ပြီးပါပြီ။ :)
အဲဒိမိန်းမရုပ်တုတွေကို မြင်ဖူးပီးသားပေမယ့် three sisters mountainsတွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီးမသိခဲ့ဘူး။ ရှုခင်းတွေက အတော်လေးသာယာတယ်။
တီဆွိရေ.. ရှုခင်းတအားလှတယ်။ ရာသီဥတုအေးတော့ တောင်ပေါ်တက်ရတာ သိပ်မမောဘူးပေါ့။ ဂျူးဂျူးလေးကြည့်ရတာတော့ ကလေးဆိုတော့ မောပုံမရဘူး။
(သြော် မေ့လို့ လက်ခုတ်တီးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ)
(Clap)3.....Juu Juu looks likeateenage girl n lovely pose.Nge Naing posted about blue mountain and three sisters few months ago.I like to read whatever you post...:)
တောင်ငူသား October 5, 2011 at 8:25 PM
ဆရာတွတ်က သူ့ရဲ့ တောဘွတ်ကြီး ပြန်လာပေးပါတဲ့ ရိုးမထဲ မဝင်သေးလို့ မသေးမျှင် ညက်မှောင်ကျုံ့ အဲ.. ညက်စောင်းထိုးနေပြီ တဲ့။
တီတီဆွိ အနွေးထည်တွေ ပေးခဲ့လိုက်ပါ။ ခမျာများ အေးနေရှာမယ်။
Nge Naing October 5, 2011 at 9:30 PM
ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာလည်း Bule Mountain ကို သွားတုန်းကအကြောင်း တင်ထားတာ ရှိတယ်။ http://nge-naing.blogspot.com/2011/05/blog-post_16.html ဒီနှစ်နွေရာသီ တခေါက်ထပ်သွားဖို့ ရှိသေးတယ်။ Magician ကို အစ်မက စုန်းဆရာ ကျွန်က မှော်ဆရာလို့ ဘာဘာသာပြန်ထားတယ်။ Bule Mountain က နွေရာသီမှ ပိုကောင်းတယ်။ ကျွန်မတို့ရောက်တုန်းက Threee Sister ကနေ တောင်ခြေထိ ဆင်းသွားပြီး တောင်ခြေမြေပြန့်ကို လမ်းလျှောက်ပြီး ဒီဘက်က ရထားနဲ့ ပြန်တက်လာတယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားတာ တောင်အောက်ကပုံနဲ့ Catoomba Part ရေတံခွန်ပုံပါ ပါတယ်။
လက်ခုပ်အပြင်းစား တီးသွားသည်........ပြီး အလန်ကွာတာဆွိ၏ ဂိုက်အားအလွန်သဘောကျစွာ ၂ခါပြန်ကြည့်သွားသည်။
အပြုံးပန်း October 5, 2011 at 11:52 PM
မြစ်ကျိုးအင်း October 6, 2011 at 2:31 AM
အလန်ကွာတာဆွိ တဲ့ နာမည်ပေးတတ်ပါ့။
mstint October 6, 2011 at 2:36 AM
စိတ်ရှည်စွာ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်။
T T Sweet October 6, 2011 at 11:45 AM
ဟုတ်လား မငယ်နိူင် သွားဖတ်ကြည့်ဦးမယ်။ မှော်ဆရာက ပိုမှန်မှာပါ။ ဒီက ဝေါဟာရ မကြွယ်ဝလို့ စုန်းဆရာ ဖြစ်သွားတား)ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ ဧည့်သည်လိုက်ပို့ရင်း အကြုံလိုက်တာဆိုတော့ rush ဖြစ်သွားတယ်။ နောက်တစ်ခေါက် အဖွဲ့လိုက်ကြီး ရထားနဲ့သွားကြမယ်လို့ ချိန်းထားကြတယ်။ အဲဒီကျမှ အစုံသွားတော့မယ်။
အမောင်တောင်ငူသား စိတ်ကောက်လို့ မလာတော့ဝူးထင်တာ။ သူကခုတော့ three sister ကို သနားနေသေးတယ်။ မသေးမျှင်ကလဲ တို့လိုပဲ ညက်စောင်းထိုးတာပဲလား ...း)
Yes Gyitaw, I will read Ma Nge Naing's post.
Yes, Ju Ju always looks older than her age since she is tall. Actually she is only Primary2student. When we were at Primary 2, we looked likeasmall kids/baby ha ha.
TOI ဟုတ်တယ် ရှူခင်းတွေကတော့ အရမ်းလှတယ်။ အန်တီဆွိက အဲဒီတောတောင်တွေထဲ လျှောက်သွားချင်တာ။ အဲဒီတောထဲဝင်သွားကြပြီး ပျောက်သွားသူတွေ အများကြီးရှိတယ်ပြောတယ်ဗျ။
ရုပ်ထုတွေကတော့ ရှေးလူသားတွေဆိုတော့ အ၀တ်တွေမပါဘူးဂျ။ ဒါကြောင့် မှတ်မိနေတာထင်တယ်။း)
မြသွေး ကျိုက်ထီးရိုးကို တကယ် လွမ်းသွားတာ။ ငယ်ငယ်ကတော့တက်နိူင်တယ် ။ မနက်၇နာရီတက်လိုက်တာ နေ့လည်၁၁ နာရီ ရောက်ရောပဲ။ ခုတော့၁၀မိနစ်ခရီးလေးကို ဟောဟဲဖြစ်နေတယ်။ ဒီမှာ လမ်းမှာဈေးရောင်းတဲ့ အသည်လေးတွေ မရှိဘူး။ အဲဒါလေးတွေလဲ လွမ်းတယ်။
ဗစ်တာ ပေးတဲ့ နာမည်က ပိုတောင်မိုက်နေသေး ဟေးဟေး အဲလို ခေါင်းစဉ်တပ်ရမှာ ... ဟမ် ))))))))) (အန်တီသက်ဝေ စတိုင်ဖြင့်ဖတ်ပါရန် :)
သန္တာ၊ အနောနိမတ်စ် ကျေးဇူး။ နာမည်ကို အတော်သဘောကျနေပုံရတယ်။
အန်တီစုရေ ကင်မရာမင်းကတော့ ဦးခြိမ့်။ သူရိုက်တာ များပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ သူလက်စွမ်းပြထားတာ။
သက်ဝေ October 6, 2011 at 3:34 PM
အလန်ကွာတာဆွိတဲ့... ချစ်ချာလေး... (အတည်ပြောခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဟမ်... ရန် မလိုအပ်ပါချေ)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 7, 2011 at 4:35 AM
ကျောက်တောင်က အလွှာလွှာဖြစ်နေတာကလည်း တစ်မျိုးဘဲ
ကလေးတွေရော ကလေးတို့အမေရော ပျော်နေမှာဘဲ
မဒမ်ကိုး October 7, 2011 at 6:19 PM
အလန်ကွာတာတီဆွိရဲကခရီးစဉ်ကို မဒိုးကန် သဘောကျစွာအနီးကပ်ကိုကြည့်သွားပါတယ်ရှင်
San San Htun October 8, 2011 at 7:20 AM
အလန်ကွာတာဆွိ တောင်တက်ရတာ ပျော်စရာကြီး...
seesein October 10, 2011 at 2:53 PM
ဘီလူးတောင်ကို အလန်ကွာတာဆွိ+ (အခုတော့ ခေါ်ပြီပေါ့ ) ညက်မှောင်ကျုံ့ ကြီးတဲ့ အရင်တုန်းကတော့ အဲလိုလေး ကျုတ်တာကိုက ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလားဘဲ......ပုံတွေ ထဲက နေ တ၀ကြီး လည်သွားပြီ သမီးလေး ဂျူးဂျူးကတော့ လှပြီးရင်လှ